🥇 ▷ Qaabka Master League ee eFootball PES 2020 wuxuu soo bandhigayaa isbadalkiisa ku cusub baatiyaha ✅
Qaabka Master League ee eFootball PES 2020 wuxuu soo bandhigayaa isbadalkiisa ku cusub baatiyaha
Dhowr bilood ka hor Konami wuxuu adduunka u muujiyey in sannadkan lagu dhisayo ku-meel-gaarka uu u leeyahay kooxdii uu ku guuleystay. Kubadda Cagta Pro, way dhici laheyd in loogu yeero eFootball PES 2020 si ciyaarta vidiyoga ah loogu dhawaado ciyaaraha elektiroonigga ah. Waxaan awoodnay inaan ku tijaabinno aasaaska ciyaarta la ciyaari karo ciyaartooy dhaqso ah isbuucyo yar ka hor, laakiin waxay umuuqataa taasi eFootball PES 2020 Way ka badan tahay intaas kuwii hore iyo kuwa masuulka ka ah ayaa doonayey inay na tusaan sida badan Horyaalka Master.
Qaabka Horyaalka Master ee eFootball PES 2020 wuxuu dib noogu soo celinayaa maqaarka macalinka kooxda heerka adduunka, laakiin markan waa uu ku sameyn doonaa horumarino muhiim ah oo ka dhigaya khibrada mid macquul ah. Isbeddelada ugu caansan waxaa ka mid ah nidaam wadahadal cusub oo is-dhexgal ah, koror dhab ah oo ku saabsan wareejinta ciyaartoyga oo nidaamka u soo dhowaanaya qiimaha suuqa iyo kootada hadda jirta, iyo moodallo hagaagsan oo loogu talagalay tababarayaasha, si aan nafteenna ugu gelin karno maqaarka halyeeyada dhabta ah. .
Muuqaallada ugu horeeya ee eFootball PES 2020: Gameplay wali waa bartilmaameedkiisa adag
Konami wuxuu sii wadaa socdaalkiisa Yurub si uu u soo bandhigo eFootball PES 2020 qaybtiisa cusub ee kubbadda cagta caanka ah ee hadda caan ah. Ka dib joogsigiisii ​​Manchester halkaas oo ay ku xaqiijiyeen imaatinka Manchester United inuu yahay koox rasmi ah…
Intaas waxaa dheer, waxaa jira horumarin garaafyo muhiim ah marka loo eego jawiga iyo sheybaarka, taas oo aan daahfuri doonno xilli xilliku sii socdo iyadoo lagu saleynayo natiijooyinkayaga iyo go’aannadeena. Hoos waxaad ka heli kartaa fiidiyowga faahfaahinta dhammaan isbedeladaan iyo waxbadan, laakiin marka hore waxaan ku xasuusineynaa taas eFootball PES 2020 gaari doona PC, PlayStation 4 iyo Xbox One bisha soo socota ee Sebtember 10.
Qaabka eFootball PES 2020 Master League wuxuu soo bandhigayaa isbadalkiisa ku cusub trailer Víctor Rodríguez